Guangdong Meiling Internet Technology Co., Ltd e guzobere na 2009, wee mepụta ụlọ ọrụ mkpokọta na ụlọ ọrụ ogidi nke mmepụta na nyocha, azụmahịa kọmputa, jikọta ịzụta onyinye na ọrụ ọrụ.
Ihe oru anyi jikoro na uru na ezi obi, okwukwe na ochicho. Ruo ọtụtụ afọ, Meiling enwetawo ọnọdụ na-adịgide adịgide site na ịgagharị ọnọdụ azụmaahịa na oge ịntanetị, na-arụkọ ọrụ ọnụ na ụlọ ọrụ ama ama ama na ụlọ ọrụ ama ama. Ka ọ dị ugbu a, Meiling nwere obi ụtọ ọtụtụ ụdị ịntanetị- Konka, Changhong, Nontaus, Daewoo, TER, MAK, BTSM. Onye ọ bụla n'ime ha nwere ọnọdụ nke aka ya, iji mejuo ahụmịhe nke ndị ọrụ sitere n'ọhịa dị iche iche wee mepụta “ikpo okwu ịntanetị” +. N'oge ịntanetị, "illingmepụta Internetntanetị +" na-eme ka ọ ghọọ ezigbo ụlọ ọrụ Internetntanetị, iji mepụta mkpokọta mmeri-mmeri na isi asọmpi nke iguzosi ike n'ezi ihe.N'ime afọ 10, anyị nwere ahụmahụ na ODM yana OEM. Na anyị adịchaghị ngwaahịa na ọrụ, anyị ike ezi azụmahịa mmekorita ya na ndị ahịa na anụ ụlọ na esenidụt ahịa.
“Meiling Internet +” ga-abụrịrị ihe nduzi maka ọnọdụ azụmaahịa na-agbanwe agbanwe n’ọdịnihu.
Meiling bụ ọkachamara suppliers nke n'ụlọ ngwa tumadi gụnyere kichin ngwa oru, ezinụlọ ngwa oru, ntụ oyi, nwoke ịga ụlọ ọgwụ & ọcha, anyị na-arụ ọrụ na n'ụlọ ngwa oru na China ruo ihe karịrị 10 afọ. E wezụga imepụta usoro siri ike na outstandingntanetị na Usoro Ọmụma. Anyị nwekwara ahaziri nhọrọ iji nyere ndị ahịa aka ebuli ha ọkọnọ yinye dị iche iche ọwa.
Ndị ahịa anyị na-agbasi mbọ ike imeju ndị ahịa. Ọzọkwa, dabere na mmekọrịta chiri anya anyị na ndị ahịa, anyị nwere ike ịnweta ozi aka mbụ site na ahịa ma zụlite ụdị ọhụụ kwesịrị ekwesị iji gboo mkpa ndị ahịa.Kwa afọ, anyị nwere ike ịzụlite ihe ọhụrụ 3-5 dịka usoro ahịa na mkpa ndị ahịa si dị, nke na-ewusi asọmpi anyị n'ahịa dabere na nkwupụta anyị nwere ezi uche. N'ime afọ 10, anyị nwere ahụmahụ na ODM yana OEM. Na anyị adịchaghị ngwaahịa na ọrụ, anyị ike ezi azụmahịa mmekorita ya na ndị ahịa na anụ ụlọ na esenidụt ahịa na-obi ụtọ na-anabata. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na nke ọ bụla n'ime ihe anyị ma ọ bụ chọọ ozi ọ bụla ọzọ, biko egbula ịkpọtụrụ anyị. Anyị na-atụ anya ịkwado gị na nso nso.
Asọmpi Maka Oversea Market
Usoro ntinye dị iche iche
Okike Mgbasa Ozi
Nzụlite ngwaahịa & Teknụzụ
Pụrụ Iche Nsogbu Ndị Ahụ?